Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Myanmar, UN agencies initial MoU on assistance for repatriation process of displaced persons from Rakhine State Naypyitaw, June 1(english+myanmar version)
Myanmar, UN agencies initial MoU on assistance for repatriation process of displaced persons from Rakhine State Naypyitaw, June 1(english+myanmar version)
Myanmar, UN agencies initial MoU on assistance for repatriation process of displaced persons from Rakhine State
Naypyitaw, June 1
The Ministry of Labour, Immigration and Population, the United Nations Development Programme (UNDP), and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) initialedaMemorandum of Understanding on 31 May 2018 at the Ministry of the Office of the State Counsellor in Nay Pyi Taw, to assist the government of Myanmar in implementing the “Arrangement on the Return of Displaced Persons from Rakhine State”, an agreement between the governments of Myanmar and Bangladesh signed on 23 November, 2017.
The MoU was initialed by Permanent Secretary of the Ministry of Labour, Immigration and Population U Aye Lwin, UNHCR Representative Mr. Giuseppe de Vincentiis and Deputy Director of the UNDP Ms. Dawn Del Rio in the presence of Union Ministers U Kyaw Tint Swe, U Thein Swe and U Kyaw Tin.
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာသွားသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အထောက်အပံ့ပြုနိုင်ရေး အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီများအကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ကနဦး လက်မှတ်တိုရေးထိုး
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့အကြား ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် “ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာသွားသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေး လုပ်ငန်းစဉ်” အား အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်မှုများအား အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU)တစ်ရပ်ကို အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (UNDP)၊ ကုလ သမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး(UNHCR) တို့အကြား ကနဦးလက်မှတ်တို ရေးထိုးခြင်း အခမ်းအနားကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေ ၃၁ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ ဦးသိန်းဆွေနှင့် ဦးကျော်တင်တို့၏ ရှေ့မှောက်၌ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဦးအေးလွင်၊ UNHCR Representative Mr.Giuseppe de Vincentiis နှင့် UNDP မှ Deputy Country Director Ms.Dawn Del Rio တို့က နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU) အား ကနဦးလက်မှတ်တို ရေးထိုးလဲလှယ်ကြသည်။